चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !
एक आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदका लागि साढे ३५ करोड खर्च
जनकपुरधाम – प्रदेश नम्बर २ सरकारले एकातर्फ महंगा नयाँ गाडी किनिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पुराना गाडीलाई थन्क्याएर कबाड बनाउँदैछ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अड्डा ‘मधेश भवन’ परिसरमा थन्क्याएर राखिएका गाडी कबाडमा परिणत हुँदैछन् ।
त्यहाँ भेटिने गाडीहरूको भीडमा केही महिना अघिसम्म मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले चढ्ने गरेको गाडी पनि थन्किएको देख्न सकिन्छ । नयाँ गाडी किनेपछि पुराना गाडीको उचित संरक्षण हुन सकिरहेको छैन ।
बा १ झ ७०९३ नम्बरको प्राडो मुख्यमन्त्री राउतले शुरू–शरूमा चढ्ने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री बनेर शपथ ग्रहण गरेलगत्तै उनका लागि नेपाल सरकारले पुरानो प्राडो गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राउतले उक्त गाडी केही महिना चढे पनि, तर नयाँ गाडी किनेपछि सो गाडीलाई महिनौंदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय परिसरमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
उक्त गाडी के कति कारणले त्यहाँ थन्क्याएर राखिएको भन्नेबारे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग पनि जवाफ छैन ।
मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा भए चलाउनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा लिलाम गरी राजस्वमा आम्दानी दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कोमलबहादुर खत्री उक्त गाडी किन थन्क्याइएको हो भन्नेबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।
‘यदि मुख्यमन्त्रीज्यूले चढ्नुभएको गाडी हो भने त्यसको खोज गरेर उक्त गाडी कुन अवस्थामा छ, लिलाम गर्नुपरे लिलाम गर्ने वा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थाको भए सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ सचिव खत्रीले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मात्र नभएर अन्य विभिन्न मन्त्रालयका गाडी यसैगरी थन्किएका छन् ।
सामजिक विकास मन्त्रालय, वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय समेतका गाडीहरू कबाड बन्ने गरी थन्क्याएर राखिएका छन् ।
बा१झ ४३५३ र बा१झ २५४९ नम्बरको मित्सुबिसी पजेरो, को१झ ४४४ नम्बरको निसान तथा को १ झ २४५ र बा १ झ ७१६९ नम्बरको गाडी थन्किएका छन् ।
ती गाडी प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा भए प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सचिव खत्री बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारलाई गाडीको त्यसै अभाव छ, यदि त्यसरी विभिन्न मन्त्रालयले गाडी थन्क्याएर राखेका छन् भने त्यसको छानबिन नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निमित्त प्रमुख सचिव खत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय गाडीको निश्चित अवधि पुगेपछि लिलाम नै गर्नु्पर्ने हुन्छ ।’
केही गाडी लिलाम गर्न अवधि नपुग्ने र मर्मत गर्दा लाखौं खर्च हुने भएकाले पनि थन्किएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।
सबै मन्त्रालयले किने नयाँ गाडी
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्नमा करोडौं रकम खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र मण्डलले दिएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा मात्रै ३५ करोड ४४ लाख ६५ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँको नयाँ गाडी खरिद गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४ करोड ५२ लाख ३० हजार ५७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ८५ लाख ४४ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ गाडी खरिदमा खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २ करोड ८४ लाख ४० हजार ७ सय ६२, उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले २ करोड ४० लाख ७५ हजार २ सय ४९, कृषि मन्त्रालयले २ करोड ५२ लाख २३ हजार १ सय ६३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २ करोड ४४ लाख ९२ हजार २ सय ५०, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख ६४ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँको गाडी किनेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश सभाले ९ करोड ७७ लाख ७७ हजार ७ सय ८, प्रदेश नीति आयोगले २ करोड ७१ लाख ४८ हजार २ सय ७, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ४ लाख ८२ हजार, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ४२ लाख ७५ हजार, वन अनुसन्धान केन्द्रले २ लाख ९८ हजार ९ सय र पशुपन्छी निर्देशनालयले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खदिमा खर्चिएको तथ्याङ्क प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ ।
हेर्नुहोस्, कबाड बन्दै गरेका थप पुराना गाडीहरू :
विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !
लोक सेवा आयोगमा सत्ता–प्रतिपक्ष भागबण्डा, भाग ढुकेर बस्दै कांग्रेस
वनमा जनता र सरकारबीच द्वन्द्व : समूहले गरेको संरक्षणमा पूरै फाइदा सरकारले लिने ?
सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी
शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !
प्रदेशसभा सांसदलाई तलबभन्दा भत्ता बढी, घुमफिरमा ४३ लाख स्वाहा !